Heshiisiinta Koonfur waa Waajib Saaran Reer Somaliland.
Waxaan ka akhriyay bogoga internetka ee Soomaalida qaarkood maqaal uu ciwaankisu yahay “KHATAR HORLEH OO KU SOO WAJAHAN SOMALILAND”. Maqaalkan qoraagu waxa uu ku dhaleecaynayaa oday dhaqameedyo reer Somaliland ah oo la sheegay in ay rabaan in ay dhexdhaxaaadin ka sameeyaan khilaafaadka ka taagan Koonfurta Soomaaliya. Arintan waxa uu qoraagu ku tilmaamay khiyaamo qaran iyo burburin loo gaysanayo Somaliland. Xaq ayuu u leeyahay qoraagaasi iyo qofkasta oo fikradaas aaminsani in uu soo jeediyo sida ay la tahay aragtidiisu, waxaase maqaalkaas ku suggan arimo muddan in ugu yaraan la dul istaago waxna laga yidhaahdo. Sidaa daraadeed ayaan nuqdooyinka soo socda (oo ku saabsan heshiiska la sheegay in ay odayaashani ay wadaan )la wadaagi akhristaha qiimaha leh.
Heshiisintu Waa Waajib Diineed
Soomaalidu waa Muslimiin. Dhexdhexaadinta Muslimiintuna waa waajib saaran qof kasta oo Muslim ah oo damiir leh. Heshiisiinta Muslimiintu waa akhlaaqda waanaagsan ee diinteenu ina faryso, halka isku dirka Muslimiintu uu yahay akhlaaqiyaadka xunxun ee la inooga digay. Waxa la soo wariyaa in Maalinta Qiyaamaha ay laba qof Alle isku ag qabsanayaan. Mid la dulmiyay iyo mid dulmi gaystay. Kii la dulmiyay ayaa Alle waxa uu ku odhanyaa walaalkaa iska cafi. Waxa uu odhan maanta Ilaahayoow ma aha maalin aan xuquuqdayda ka tanaasulayo. Waa uu diidi.!!. Marka uu sidaas yidhaahdo ayaa Ilaahay waxa uu u soo bandhigi Qasar (Palace) wayn oo quruxdiisa aan la sifayn karayn. Wuxuu odhan qofkaas la dulmiyay Ilaahayoow yaa iska leh Qasarkan. Alle waxa uu ugu jawaabi adigaa iska leh...laakiin waa hadaad iska cafiso walaalkaagan ku dulmiyay. Waan cafiyay ! waan cafiyay ayuu la soo boodi!!!. Nabi Maxamed (CSW) markii uu ka sheekeeynayay arinkan ilmo ayaa ka timid waxaanu yidhi “ Ilaahay ayaa sidaas adoomihiisa u dhexdhexaadinaya ee adoomihii Alloow idina sidaas oo kale u dhexdhexaadiya Muslimiinta. Sidaa daraadeed waxaan leeyahay khilaafaadka Siyaasiga ah ee Muslimiinta dhex iman karaa waa in aanay marna ina iloowsiin mab’dan assaasiga ah ee ay diinteenu ina farayso. Arinkani waa arin aan filayo in aanu daliil u baahnayn.
Salaadiinta Mawqifkoodu khiyaamo ma aha
Oday dhaqameedyadu ma aha markii ugu horeysay ee ay khilaafaad ka baxsan Soomaaliland dhex galaan. Heshiiskii dhinacyadii isku hayay Puntland ee odayaasha qaarkood ka qayb galeen waxa uu ahaa mid la wadda ogsoonyahay. Odoyaashaa ka qaybgalay heshiiska Puntland khiyaamada ay gaysteen iyo burburka uu keenay mee?. Niyadda odayaashan garn maayo oo Ilaahay baa og taa laakiin mawqifka ay qaateen waa mid ka duulaya Islaanimo, dhaqan wanaagsan yo dadnimo. Hadii ay Kiiniyaanka iyo gaalada ka fog fogi ay isku dayayaan in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka Soomaaliyeed, miyaanad adigoo Musulim ah kula haboonayn in aad ugu yaraan isku dayddo daminta dabkan holcaya ee dadka ku gubanayaa ay u badan yihiin masaakiin wax ay galabsadeen aaanay jirin.?.
Nicmadda Alle Ha Ilaawin
Aminga iyo dhergu waxa weeye nicmoyinka Alle. Nabadda iyo dherega maanta ka jira Hargaysa, Boorame iyo Burcaba waa nicmooyinka Alle ee u baahan in Alle lagu mahadiyo. Nicmadani kuma iman xeelad iyo maskax bani’aadmi laakiin waxa ay ku timid tawfiiqda Alle. Aragtidaydana odoyaashani waa kuwuu Alle garnsiiyay in ay qaboojiyaan fidnooyinkii soo dhex maray dadka walaalaha ah ee wadda degga mandaqadan, nicmada maanta la haystaana Ilaahay ka dib sababtooda ayay ku timid. Hadii hadaba ay odayashani ay doonaan in xigmadii Alle waafajiyay ay la wadaagaan Soomaalida kale, aragtidayda waa mid ka turjimaysa garashada odoyaashan ee Nicmooyin Alle ….ee ku garab istaag.
Xalka Soomaaliya Waa Waddada Xalinta Qaddiyada Somaliland
Inta ay dhibtu ka jirto Soomaaliya qadiyadda Somalilandna waxa ay ahaanaysaa mid sidaa ay tahay ahaata. Waxa ay ahaanaysaa dawalad iyaddu is ictiraafsan laakiin aanay jirin cid ictiraafsani.Taasi waa sida ay ahayd toboneeyadii sanno ee la soo dhaafay xalna ma’aha. Sidaa daraadeed aragtidayda in dhibta Soomaliya xal loo helaa waxay ay keenaysaa in qaddiyadda Somaliland xalinteeda si dhaba loo galo. Shuruudaha la soo jeedinayo in lagu xidho heshiiisiinta odayaashani ay wadaan waxaa ka midda in marka hore dadkan la heshiisiinyaa ay qiraan jiritaanka Somaliland. Aragtidayda xitaa haday qiraan jiritaanka Somaliland wax badan ku soo kordhin mayso qadiyadda Somaliland. Waxa wax soo kordhinyaa waxa weeye in la helo dawlad Soomaliyeed oo la xajooota Somaliland. Hadii markaa laga qaybqaaadan karo sidii lagu keeni lahaa dawladaa waxaan aaminsanhay in laga qayb galo keenitaankeeda waayo taas ayaa faa’idadu ugu jirtaa labada dhinacaba. Waxaaban arkaa in siyaasada ah halkaaga fadhi inta ay Somaaliya xal helayso ama ay burburayso ay noqotay mid waxba aan soo kordhin, waxaanan aaminsanaa walina aaminsanahay in reer somalinad ay tagaan meelaha qadiyadaha Soomalida lagu hayo aanay dadka kale u bandhigaan xalka ay arkaan…..waxaaba laga yaabi lahaa in dad badani ay ku raaci lahaayeenba.
Intaas ayay ku eegtahay aragtidaydii …..waxaaan rajaynayaa in aan wuxuun ku soo kodhiyay doodan.
Daahir Rayaale oo Gaashaanka ku Dhuftay Hindisahii
Salaadiinta Somaliland ee heshiisiinta Beelaha reer Muqdisho Guji